China OEM 3D Eyelashes Mink Lashes Handmade Makeup Full Strip Lashes ifektri abakhiqizi | Weiti
I-OEM 3D Eyelashes Mink Lashes Makeup Madeup Makeup Full Strip Lashes
1, DOLORES isitayela imivimbo yemvelo
2, 14mm 100% izinwele ze-mink zangempela
I-3, ibhokisi elenziwe ngemivimbo yangasese elenziwe ngokwezifiso
I-4, isitoko esikhulu esilungile futhi sithumela ngesikhathi
1, Iqoqo Lezemvelo Eliwele & Izendlalelo Eziningi:I-mink eyelashes yethu ngayinye yenziwe ngesandla. Inomphumela ogqamile ophelele, okhazimulayo ocacile, futhi ocwebezelayo. Ingasikwa emaphethelweni, yenze izimonyo ezinhle. Kufanele ukugqoka nsuku zonke, ukudubula isithombe somkhosi.
I-2, i-Premium Mink Fur engenalo unya:Inkophe lethu alinalo Unya, elenziwe ngoboya be-mink yaseSiberia, obuqhamuka emisileni yezinwele zemvelo ezizalisayo ezizalisayo. Ngemuva kwalokho kuhlanzwe futhi kwafakwa umbala ngaphambi kokuba kuhlanganiswe. Okwamanje, imivimbo yemicu ye-mink izizwa ikhululekile kunemivimbo yokwenziwa. I-soft soft, egobile, i-hypoallergenic, njengemivimbo yemvelo yomuntu, futhi akukho okucasulayo emehlweni akho.
3, Ibhande Likakotini Elenziwe Ngesandla:Umugqa omucu omnyama omnyama wenza amehlo akho abukeke ngomphumela we-eyeliner, muhle futhi uthandeke. Ingaphinde isetshenziswe ngaphezu kwezikhathi ezingama-20-25 ngokunakekelwa okufanele. Akulula ukuhlukana nesiqeshana esiqinile sokuqhuma.
4, Isisindo Esilula- Awukho Umuzwa:Isisindo ngasinye se-mink eyelashes singama-0.5 amagremu kuphela. Imithwalo engasindi "0", awukho umuzwa osindayo. Ngakho-ke noma ungezwa isisindo sayo, uma usigqokile. Ngasikhathi sinye, iphephile futhi inobungane ngamehlo abucayi noma othwala ilensi yokuxhumana.
Langaphambilini Ukuthengiswa Okushisayo kwe-3D Mink Eyelashes Wholesale 100% Real Siberian Mink Lashes
Olandelayo: I-Factory Bulk Mink Eyelashes Umthengisi we-3D Lashes nge-Private Label Eyelashes Box
I-3D Yemvelo 100% Mink Eyelashes
Mink Eyelash yamanga
Imivimbo engu-Strip Full
i-eye liner, Abadayisi bezinkophe, Ukuqhuma Kwamehlo, ezambiwa, imivimbo ye-mink, Izandiso ze-Eyelash,